Muroyi: Odhiyo bhuku rakateedzana nezve muroyi Geralt - Spielpunkt - Bhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 9, 2022 | Bücher, nhau
Muroyi munzeve dzako: Witcher Geralt inowanikwawo mune odhiyo bhuku fomati. Kubva pakaburitswa iyo Netflix nhevedzano, iyo Witcher zvakasikwa zvakatenderedza Geralt von Rivia yakagamuchira zvinhu zvitsva gore rega rega. Mafeni emitambo uye Netflix bhaisikopo gadziriso ichafanirwa kumirira kusvika Iyo Muroyi 4 uye Season 3 zvaburitswa. Kana iwe uchida kuzama zvakadzama panguva iyoyo asi usinganzwe kuda kuverenga, iwe unofanirwa kutarisa iyo The Witcher audio book series.
Chero ani anoziva imwe yeinogadziriswa yeThe Witcher anoziva zvaanazvo muWitcher zvakasikwa. Nyaya yakanyorwa nemunyori wePolish Andrzej Sapkowski inopa musanganiswa wezvese: chiito, intuition, zvisikwa zvengano, hushamwari, rudo uye chikamu chemanzwiro emhuri pakati peGeralt naCiri.
Ndizvo zvinoita kuti Muroyi ave akakosha
Chinhu chimwe chete chinonyanya kuratidza Muroyi: Iyo ngano yeSlavic inomhanya nepakati. Ichokwadi kuti saga yehuroyi zvakare ine zvisikwa zvinoonekwa mune mamwe epic epic uye mune imwe neimwe yakanyatsorongedzwa. Encyclopedia of mythical zvisikwa inogona kuwanikwa, asi pane nguva dzose Eastern Europe zvisungo kunyanya. Zvikasadaro, iyo show yakavakirwa pakare Poland. Iyi mamiriro asina kujairika anoita kuti Muroyi amire pakati pemamwe mabasa eCentral European.
Makore makumi matatu eMuroyi
Sapkowski yakaburitsa nyaya dzekutanga nezveGeralt mukutanga 90s. Pakutanga chete yakarova munyika yayo yekubva, Poland, saga yehuroyi yakawana budiriro yepasirese pamakumi matatu emakore akatevera. Kugadziriswa kwezvinyorwa kune chikamu chebasa, kutanga nekushandiswa semutambo wevhidhiyo muna 2007. Mitambo, kuwedzera kwayo uye spin-offs zvakakamurwa pamusoro. mamiriyoni makumi mashanu emakopi akatengeswa. Kune zvakare mitambo yepatafura, mitambo yemakadhi, makomiki nemafirimu.
Pakati pekupedzisira, iyo Netflix yakatevedzana yakakonzera mhirizhonga. Mwaka wechitatu wakatorwa kubva muna Kubvumbi 2022. Zuva rekuburitsa harisati ratotarwa, asi rinotarisirwa kunge riri pakati pekutanga kusvika pakati pa 2023. Izvi zvisati zvaitika, iyo Ropa Origin yakatevedzana, iyo The Witcher prequel, ichaburitswa mukupera kwa2022. Kutevera iyo animated firimu Nightmare yeWolf, iyo yakatsaurirwa kuseri kwaVesemir, Netflix iri kuwedzera kutora kwayo paWitcher saga.
Kana iwe uchida kuziva denga nemativi aro ese, haugone kunzvenga zvinyorwa zvaAndrzej Sapkowski.
The audiobook series yakaburitswa muna 2014 Inonzwisisika uye inotaurwa naOliver Siebeck, uyo vateveri vanoziva saGame-Geralt's voice actor. Mukupesana neinovhero, unogona kutevera nyaya yacho nemabhuku ekuteerera chero kupi zvako, mungave mukugeza, munzira kuenda kubasa, panguva yekuzorora kwemasikati kana pakuita basa repamba. Nehurefu hwemaawa angangoita gumi nemaviri panovhero uye mashanu pavhoriyamu yenyaya pfupi, izvi zvinoshanda.
Kana ukasarudza bhuku rekuteerera, unofanira kuteerera kurongeka. Mabhuku ekuteerera ishanduro dzisina kupfupikiswa dzemanovhero uye nyaya pfupi uye anoteedzera nguva yadzo: Pamberi peiyo huru nhevedzano, mavhoriyamu Chishuwo Chekupedzisira, Dutu uye Munondo weProvidence anofanira kuteererwa. Iwo makuru akateedzana nawo ane mavhoriyamu Nhaka yeElves, Zera Rokuzvidza, Rubhabhatidzo rweMoto, The Swallow Shongwe uye Mukadzi weLake.
Mafeni anofanira kugadzirira misiyano iyi
Kana iwe uri muteedzera fan anotora bhuku rekuteerera, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira mutsauko, nekuti iyo Netflix yakatevedzana inosanganisa zvirimo kubva mumanovhero uye pfupi nyaya mavhoriyamu, asi zvakare inotora rusununguko.
Kunyangwe kana zvasvika kune maonero, akatevedzana musiki Hissrich anotora nzira yakasiyana nemunyori Andrzej Sapkowski: iyo prequels yeinoveli nhevedzano inotanga naGeralt uye inongopatsanurwa kuita akati wandei maonero mumutambo mukuru. Iyo Netflix inogadziriswa, kune rumwe rutivi, inobuda yese ine nyaya nhatu.
Iwo akatevedzana anotorawo kodzero yekuwedzera pane zviitiko zvinongoratidzwa mubhuku. Izvi zvinosanganisira Hondo yeSodden Hill uye Yennefer's backstory, kusanganisira tsika inomushandura kuita muroyi. Zvimwe zviitiko munhevedzano, sekushandurwa kwevasikana vechikoro, zvinowedzerwa zvakasununguka, nepo vamwe, sekutanga kusangana kwaCiris naGeralt, vanosiiwa. Kune zvakare misiyano yenguva: Ciri naGeralt vanosangana kunonoka munhevedzano, asi Triss Merigold inoonekwa pakutanga munhevedzano uye masimba aCiri anokurawo nekukurumidza.
Mumwe musiyano mukuru uri muvatambi. Iyo Netflix inogadziriswa inovimba nekusiyana kwakawanda kupfuura iyo yekutanga novel. Hunhu nemagariro zvinochinjawo. Fringilla, semuenzaniso, anobva kuNilfgaard mune inovhero, asi anongotumirwa ikoko semupi wezano munhevedzano. Vadiki vatambi vakaita saEyck von Denesle vanoonekwa munhevedzano sevakapesana nevatambi vavo venganonyorwa. Kunyangwe Geralt semutambi mukuru haapukunyuka shanduko: Chero ani anotanga bhuku rekuteerera achaona kuti anowana mukana wekutaura kazhinji mariri.
Geralt sebhuku rekuteerera: zvakakosha here?
Iyo Witcher yakawana chinzvimbo chayo chekunamata pakati pevateveri. Iyo Netflix inogadziriswa inotora yakawanda rusununguko uye inotsauka kubva patemplate. Kana iwe uchida kunyura mukati menyika yeGeralt von Rivia, iwe unofanirwa kuenda kune yekutanga. Iro bhuku rekuteerera rinoburitsa izvi zvizere uye saka rakakwana kune chero munhu, kunyangwe nehupenyu hwemazuva ese, haamire. zvakatonyanya kubva kuThe Witcher kuda kuita pasina.
Kare The Division 2: Update inounza hutsva uye co-op mode
Inotevera Yekutanga Rat Board Game Ongororo: Inopisa musoro pane dzinozivikanwa maitiro
Kubudirira kweNintendo Shandura isina kuputsika: Mikana zvakare muna 2021?
Niantic uye Sony: Mahedhifoni matsva ekuwedzera kunyudzwa kweAR
Pepa Mario: The Origami King for Nintendo Switch - New trailer inoratidza dzakasiyana siyana nzvimbo